XOG & GORFEYN: Maxaa inooga baxay hadalkii Abu Mansur al-Amariiki ee AlQacida iyo Shabaab |
XOG & GORFEYN: Maxaa inooga baxay hadalkii Abu Mansur al-Amariiki ee AlQacida iyo Shabaab
Jihaadiga Mareykanka ah Cumar Xamaami, oo loo yaqaano Abu Mansour al-Amriki ayaa dib usoo muuqday Talaadadii (September 3-deedii), waxa uuna ku dhawaaqay in uu ka gadooday al-Shabaab iyo al-Qaeda.
Warbaahinta ayaa tabisay in ay dileen dagaalyahanno daacad u ah hoggaamiyaha sere ee al-Shabaab Axmed Cabdi Godane bishii May, balse al-Amriki ayaa la xiriiray Codka Maraykanka (VOA) qeybteeda Soomaaliga Talaadadii kadib markii labo kamid ah xaasaskiisa ay Diinsoor ku xireen xubno ka tirsan Amniyaadka al-Shabaab.
Waraysi uu siiyay VOA-da, ayaa waxa uu ku dhawaaqay in uu ka baxay al-Shabaab iyo al-Qaeda, isaga oo sheegay in Godane uu isku badalay kaligi taliye.
“Waxa dhibaatada keenay waa in asal ahaan uu ka tagay mabaadi’da diinta,” ayuu yiri al-Amriki, isaga oo Godane ku sheegay hoggaamiye kaligii taliye ah oo lamid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre.
Waxa uu mar kale ku eedeeyay Godane, oo inta badan loogu yeero Mukhtaar Abu Zubayr in uuisku dayay in uu dilo iyo sidoo kale dilka qofka marti-galiyay labada xaas ee al-Amriki.
Al-Amriki waxa uu sheegay in uu safar kula jiro koox yar oo dagaalyahanno ah, uuna ku dhuumaalaysanyo jiiqda gobolada Bay iyo Bakool.
Kadib dagaal aan noociisa hore loo arag oo ka dhacay Baraawe bishii June, una dhaxeeyay laba garab oo iska soo hor jeedda oo al-Shabaab ah – kaa oo ay kuwa Godane daacadda u ah ku dileen laba taliye oo al-Shabaab ahaa oo aad loo tixgalin jiray, Ibrahim al-Afghani iyo Sheekh Macalim Burhaan — al-Amriki ayaa la sheegay in uu ka cararay Baraawe si uu ugu biiro hoggaamiyaha al-Shabaabka ah Mukhtaar Rooboow Cali oo jooga gobolka Bakool.
Ka aamin bixiddii al-Qaeda
Ka bixitaanka a-Amriki ee al-Qaeda iyo al-Shabaab ayaa yimid kadib markii uu ka rajo-dhigay in al-Qaeda ay tallaabo u qaaddo in ay ka badbaadiso Godane iyo taageerayaashiisa, sida uu qabo Cumar Sheekh Cabdiraxmaan, oo ah falanqeeye ammaan iyo agaasimaha Xarunta Wadahadalka iyo Dhexdhexaadinta ee saldhiggeedu yahay Muqdisho.
“Xamaami ayaa in muddo ah si quus ay ku jirto ugu miciin dalbanayay al-Qaeda, waana ay ku guul-darreysatay in ay caawiso, sidaa daraadeed waxaa u cadaatay in al-Qaeda aanay u baahneeyn, iyada oo al-Shabaab ay isaga baadi goobaysay, sidaa daraadeed labadaba waa uu ka baxay,” ayuu Cabdiraxmaan yiri.
“Waxaa macquul ah in Xamaami uu ku fikirayo in al-Qaeda ay dhanka Godane martay, taa ayayna noqon kartaa sababta uu uga tagay, balse al-Qaeda dhowaanahan waxa ay u muuqatay in ayan u midaysnayn sidii ay bari ahaan jirtay, taa oo la micno ah in aanay waxba qaban karin xitaa haddii ay doonayso in ay tallaabo ka qaaddo Godane marka laga cabbiro sida ay u wiiqantay,” ayuu yiri.
Kuwa hadda al-Amriki difaacaya waa hoggaamiyayaal hore oo meel dhexaad ka ahaa al-Shabaab kuwaa oo iyagana sidoo kale ka baxsaday Godane, ayuu yiri Cabdiraxmaan, isaga oo intaa ku daray in qabaa’illada ay ka soo jeedaan kuwa soo baxsaday ay gacan ka gaysanayaan difaaca al-Amriki.
“Mukhtaar Rooobow Abu Mansuur ayaa sidoo kale carar ku jira, isaga oo ka baxay garabka Godane, sidaa daraadeed waxaa macquul ah in uu isla go’aankaa qaato,” ayuu yiri Cabdiraxmaan, isaga oo intaa ku daray in go’aankii ugu dambeeyay ee al-Amriki uu saameyn ku yeelan karo xubnaha al-Shabaab ee fikradiisa la qaba in ay qaataan go’aankaa ayna ka baxaan kooxda.
General Xuseen Yuusuf Dhuumaal, oo ah taliyihii hore ee militariga Soomaaliya xiligii dowladda kumeelgaarka ahayd, ayaan wax macne leh ka soo qaadin hadalada al-Amriki, isaga oo sheegay in uu [al-Amriki] la tacaalayo sidii ku noolaan lahaa.
“Ma awoodo in uu [nolo]shiisa difaaco, sidaa daraadeed in uu xiriirka u jaro al-Qaeda ama al-Shabaab waxba kama qaadayso iyaga,” ayuu sheegay.
Waxa uu sheegay in arrinta kaliya ee go’aanka al-Amriki uu muujinayo ay tahay guul-darrada isdaba joogga ah ee al-Shabaab ku sii dhacayso, waxa ayna xukuumadda siinaysaa niyadda ay u baahantahay si ay al-Shabaab uga saaraan meelaha ay wali haysato.
Markii afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisoow la waydiiyay in uu ka hadlo waraysiga al-Amriki, waxa uu sheegay, “Waxa kaliya ee aan oran karaa waa in aynaan waligeen la hadli doonin argaggixiye caalamka laga aqoonsanyahay.”
Ma aannu bixin faahfaahin dheeri ah oo ku aaddan sida xukuumadda federaalka qorsheeynayso in ay u siticmaasho ka bixidda al-Amriki ee al-Shabaab si ay horay ugu sii waddo dagaalka ay kaga soo hor jeeddo kooxda, balse waxa uu sheegay in mas’uuliyiinta maamulka ay Arbacada qaban doonaan shir jaraa’id oo ay dadka uga warramayaan ammaanka guud ee Soomaaliya.
Tani ma ahan markii ugu horreysay oo al-Amriki la wariyo in uu geeriyooday muddo bilo ah kadibna uu kasoo muuqdo fariin fiidiyoow oo online ah ama baraha bulshada ay ku kulanto.
Billowgii 2012-kii, ayuu al-Amriki — oo markaa ahaa mid kamid ah ducaadda ugu waaweyn al-Shabaab — soo saaray farriimo muuqaalo ah oo isdaba joog ahaa isaga oo waydiisanayay al-Qaeda in ay soo fara-galiso khilaafka ka dhex jira hoggaanka al-Shabaab. Al-Amriki ayaa sidoo kale sheegay in noloshiisa ay halis ugu jirto saaxiibadiisa xubnaha al-Shabaab kadib markii uu bannaanka u soo saaray sida uu uga soo horjeedo kooxda xagjiriinta Soomaaliya.
© 2013, ↑ Somalimedia